Bidaarta ha noolaato! | Ragga Stylish
Bidaarta ha noolaato!
Lucas garcia | | La xiiray
Runtii inbadan oo idinka mid ah ayaa walwalsan ... Maalinta maanta oo kale, waxaad ku jirtaa qubeyska, waxaad dhaqeysaa timahaaga, isla markaana waxaad si lama filaan ah u aragtaa sida tartiib tartiib ah ee aad ugu yaraaneyso timaheena. Waxay gaaraysaa heer haddii timahan lumay ay horumar yihiin, ma jirto qaab lagu qariyo.
Hagaag, ma jiraan wax la qariyo, maxaa yeelay bidaar yeelashadu maahan wax lagaa xishoodo, waxaa jira qaabab badan oo bidaartaada looga dhigo mid qumman, maantana waxaan ku siinayaa tilmaamo fudud oo aad ku heli karto madaxaaga oo qumman.
1 Tallaabada koowaad… Maxaan ku sameeyaa timahayga markay joojin waayaan dhaca?
2 Tallaabada labaad… Waxaan billaabayaa inaan madaxayga xiiro, halkee ayaan ka bilaabayaa?
3 Tallaabada saddexaad ... Nadiifintu waa lama huraan
4 Dhar noocee ah ayaa ku habboon ragga bidaarta leh?
Tallaabada koowaad… Maxaan ku sameeyaa timahayga markay joojin waayaan dhaca?
Waxaan adeegsan karnaa alaabada la isku qurxiyo si ay nooga caawiso joojinta deyrtan, laakiin waxaa jira waqtiyo aan sugnay oo ay goori goor tahay. Hadday taasi tahay kiiskaaga, tallaabada ugu horreysa waa aqbalaad si loo arko waxa dhabta ah ee socda. Haddii aysan jirin si wax loo qariyo, jaray khasaarahaaga, aniguna waxaan kuu sheegayaa macno ahaan, waa waqtigii aad xiiri lahayd madaxaaga.
Kahor intaanan bilaabin, waxaan ku tusayaa jilayaal taxane ah iyo moodello si fiican ula qabsaday madaxooda bidaarta leh oo si fiican ugu habboon. Jilayaasha sida Bruce Willis, Jason Statham ama Sir Patrick Stewart iyo moodellada sida Tyson Beckford (oo aan xitaa xiiranayn), ayaa doortay inay madaxooda xiiraan si ay u muujiyaan in xiirashada wanaagsan ay tahay mid qumman.
Tallaabada labaad… Waxaan billaabayaa inaan madaxayga xiiro, halkee ayaan ka bilaabayaa?
Waxaan ku bilaabi doonnaa jarista timaha sida ugu gaaban ee suurogalka leh maqas ka dibna u isticmaalno makiinadaada wax yarna adigoo yar oo madaxa xiiraya oo aan uga tagno meel walba si siman. Aad ayey ufiicantahay marka aad xiirto inaad ku sameyso timo qoyan. Hada suuqa waxaa ku yaal mandiillo aad u wanaagsan oo naga caawin kara inaan ka dhigno kaamil. Si aad u xiirto madaxaaga si ka fiican, waxaad ku sameyn kartaa hoosta qubeyska. Biyaha kulul waxay kaa caawin doonaan furitaanka dalooladaaga waxayna sahlayaan inaad timaha iska jarto.
Haddii aad ku sameysid meel ka baxsan qubayska, isticmaal jel xiirashada oo had iyo jeer ka bilow dusha sare ee madaxa, ka dibna dhabarka oo ku dhammaato dhinacyada.
Tallaabada saddexaad ... Nadiifintu waa lama huraan
Markaad dhamaysid, ku maydh biyo qabow ka dibna mari qoyaan si aad u dejiso una yareyso xanaaqa.
Kadib, adoo kaashanaya muraayada gacanta, fiiri wixii timo madax adag ama balastarro ah oo haray.
Sidaad arki karto, go aan qaadashadu way fududahay oo waxbadanbaa ka sii badan. Oo hadda waxaan kaala hadlayaa wax xaqiiqdi xiisaha kuu leh:
Dhar noocee ah ayaa ku habboon ragga bidaarta leh?
Jawaabtu waa fududahay. Haddii aad fileysay nooc ka mid ah isku-darka, ha filanin, maxaa yeelay dharka sida ugu habboon ugu habboon ragga bidaarta leh waxay la mid yihiin ragga timaha leh. Ma jiro wax farqi ah, waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin qaabkaaga shaqsiyeed iyo waxa aad ugu raaxeysato.
Fadlan la soco taas waxa ugu muhiimsan waa aragtidaada. Waa inaad naftaada aaminto oo aad ka fikirto inay tani tahay hal talaabo oo kale, oo aad wax badan ka heli karto, oo aad noqon karto kuwa ugu soo jiidashada badan.
Gudaha Inclass: Ku sii jiritaanka qodista, dareenka ugu horreeya ee bilicsanaanta ragga
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Bidaarta ha noolaato!
T-shaati muhiim ah jiilaalkan. Ha iloobin iyaga!
Kabaha Supra Skytop III, dhammaantood waxay ku yimaadaan casaan